“ရင်​နင့်​​ကြေကွဲစရာ အဖြစ်​​အပျက်​ တခု” - APANNPYAY
Home / ဖြစ်ရပ်မှန် / “ရင်​နင့်​​ကြေကွဲစရာ အဖြစ်​​အပျက်​ တခု”
“ရင်​နင့်​​ကြေကွဲစရာ အဖြစ်​​အပျက်​ တခု”
Apann Pyay 4:11 PM ဖြစ်ရပ်မှန် Edit
အရွယ်​မ​ရောက်​​သေးတဲ့ မိန်းက​လေး တစ်​​ယောက်​ ဘာသာခြား ​ကောင်​​လေးနဲ့ ခိုးရာလိုက်​​ပြေး​တော့ မိဘ​တွေက သ​ဘော မတူသလို ဥပ​ဒေအရအသက်​မပြည့်​​သေးတဲ့အတွက်​ နှစ်​ဖက်​မိဘ​တွေ​ရှေ့မှာ ခွဲ​ပေးပြီး မိဘ​တွေလက်​ထဲ အပ်​​ပေးလိုက်​တယ်​။
ကျ​နော်​​ရောက်​သွား​တော့ ဦး​ဏှောက်​မှာ ဟက်​တက်​ကွဲ​နေ​တော့ ​ဆေးရုံပို့ရပီ​ပေါ့​ဗျာ…​ငွေ​ကြေးမတတ်​နိုင်​​တော့လည်း ….နီးစပ်​ရာ​ဆေးရုံမှာဘဲ့…​ဆေးကုသရတာ​ပေါ့ ဗျာ။
​ဆေးရုံးတက်​ပြီး ၇ ရက်​​မြောက်​တဲ့​နေ့မှာ သူ့ညီမ​လေးဆုံး​တော့ အစ်​ကိုဖြစ်​သူကို ဖမ်းရပြီ​ပေါ့။ အ​မေလုပ်​တဲ့သူခမြာ….ရင်​ကြိုးရပီ​ပေါ့…ကြားရတဲ့သူတိုင်းကလည်း…စိတ်​မ​ကောင်းဖြစ်​ရပီ​ပေါ့ ….
👏 နှလုံးသားမှာ ဘုရားတည်​နိုင်​ကြပါ​စေ
အရှယျ​မ​ရောကျ​​သေးတဲ့ မိနျးက​လေး တဈ​​ယောကျ​ ဘာသာခွား ​ကောငျ​​လေးနဲ့ ခိုးရာလိုကျ​​ပွေး​တော့ မိဘ​တှကေ သ​ဘော မတူသလို ဥပ​ဒအေရအသကျ​မပွညျ့​​သေးတဲ့အတှကျ​ နှဈ​ဖကျ​မိဘ​တှေ​ရှမှေ့ာ ခှဲ​ပေးပွီး မိဘ​တှလေကျ​ထဲ အပျ​​ပေးလိုကျ​တယျ​။
ကြ​နျော​​ရောကျ​သှား​တော့ ဦး​ဏှောကျ​မှာ ဟကျ​တကျ​ကှဲ​နေ​တော့ ​ဆေးရုံပို့ရပီ​ပေါ့​ဗြာ…​ငှေ​ကွေးမတတျ​နိုငျ​​တော့လညျး ….နီးစပျ​ရာ​ဆေးရုံမှာဘဲ့…​ဆေးကုသရတာ​ပေါ့ ဗြာ။
​ဆေးရုံးတကျ​ပွီး ၇ ရကျ​​မွောကျ​တဲ့​နမှေ့ာ သူ့ညီမ​လေးဆုံး​တော့ အဈ​ကိုဖွဈ​သူကို ဖမျးရပွီ​ပေါ့။ အ​မလေုပျ​တဲ့သူခမွာ….ရငျ​ကွိုးရပီ​ပေါ့…ကွားရတဲ့သူတိုငျးကလညျး…စိတျ​မ​ကောငျးဖွဈ​ရပီ​ပေါ့ ….
ဒါ​ကွောငျ့​….ကြ​နျော​တို့ရဲ့ ညီအဈ​ကို​မောငျ​နှ​မ​တှအေားလုံး ဒီအဖွဈ​အပကျြ​ကို…သငျ​ခနျးစာယူပီး…. ယခုလို ရငျနငျ့စရာ​​အဖွဈ​အပကျြ​မြိုးမဖွဈ​ရ​လေ​အောငျ​…ဘာသာတရားအဆုံးအမ​အောကျ​မှာ သတျိပွု ဆငျ​ခွငျ​ထိမျးသိနျးနိုငျ​ကွပါ​စလေို့. ..ဆန်ဒပွုရငျး။
👏 နှလုံးသားမှာ ဘုရားတညျ​နိုငျ​ကွပါ​စေ